Injinia Injinia si na UPV (Mahadum Polytechnic nke Valencia) Pụrụ iche na lọjistik na arụmọrụ nyocha yana anya na Igwe Mmụta. Omiiko banyere DIY ma ọ bụ otu esi eme ndụ.
Ime nchọgharị na zighachi akwụkwọ nnọchiteanya bụ ụzọ ọzọ na-enwe ike ịchọgharị na-amaghị aha, ma ọ bụ na nke m ugbu a iji nwee ike ịpụ na mba ụfọdụ, ya bụ, ịnyagharịa n'ụzọ nke weebụsaịtị wepụtara na anyị nọ n'otu mba
Otherbọchị gara aga m kọwara otu esi amanye TOR, ka o wepu anyi na uzo nke otu obodo. Ma ozugbo m malitere na ule, enwere m ike ịme nyocha na ọtụtụ mba, mana na ndị ọzọ dị ka Portugal, enweghị m ike, n'ihi na ọ dị ka enweghị ụzọ npụpụ na Portugal na TOR na-eche echiche ebighi ebi.
N'ihi ya, m doziri nsogbu ahụ jikọta na zighachi akwụkwọ nnọchite iji kọwaa nchọgharị site na mba ahụ.
Basilisk nke Jon Bilbao dere
Basilisco, nke Jon Bilbao bu ezigbo akwukwo, ọ bụ ezie na-abịa site na onye nkwusa Impedimenta ọ naghị eju m anya.
Anyị enweghị ike ịmalite ọrụ a n’amaghị ihe ọ bụ a basilisk, ihe omuma ihe omuma nke puru iji anya ya gbue. Ejiri aru na agwo, ewere ya dika eze agwọ. enwere otutu akụkọ ifo n'azụ ya, nke a abụghị isiokwu maka ya.
Enwere m mmasị na ya nke ukwuu, mana enwere m mmetụta na m agwụbeghị ịghọta ihe niile, na enwere m ikuku na ikuku nke m na-ejidebeghị ijide yana na ọ chọrọ ịgụ nke abụọ.
Nnukwu ọdọ mmiri dị na North America
Edemede a bu ihe edere Osimiri Ukwu nke North America, otu nnukwu ọdịdị ala dọọrọ mmasị m. Edeputara ihe ndetu site na edemede site na site na akwukwo ihe omuma nke National Geographic, ana m ahapu akwukwo akwukwo na njedebe.
Enwere m olileanya na ị ga-enwe ọ andụ ma chọpụta ụbọchị niile m ga-ahapụ bara uru. Ugbu a, mgbe m gụrụ banyere ụmụ amaala India bi na mpaghara a, m ga-enwe ike ịghọta ịdị nnukwu ya.
Akwụkwọ akụkọ na edemede nke anyị kwurịtara na blọọgụ ma edobe ya na Native North American Comanche na Crazy Horse na Custer
Abalị na-anọgide maka onye ọ bụ.
Mmiri mmiri ozuzo Ọ bụ nnukwu akwụkwọ Julio Llamazares. N'ihi na m a 5 kpakpando na ọbụna otú ahụ ka m maara na ọ bụghị a akwụkwọ maka onye ọ bụla. Have ga-agụ ya nwayọ ma nụ ya nwayọ.
Amalitela ịgụ akwụkwọ ahụ ma ọ bụrụ na ịnweghị ahụ maka mwute, mwute, melancholy na iji nwayọ na-agụ. Dọrọ gị aka ná ntị.
Peeji1 Peeji2 ... Peeji55 Ọzọ →